Ku soo-dhowaada Xafiiska Shaqada
Is-qiimaynta karti-xirfadeedka lamaha xirfadaha
Habka ugu fudud ee loola xiriiri karo adeegga Xafiiska Shaqada waa adigoo adeegsada hoyga Internetka
Adreeska hoyga internetka ee Xafiiska Shaqada waa arbetsformedlingen.se. Waxaa goobtaas ka heli kartaa shaqooyin, shirkadaha shaqooyinka bixiye-na isla goobta ayee adeegsan karaan. Waa warbixin loogu talaggalay ummada oo idil - afar iyo labaatanka saacadood.
Waxaanu taageero u soo bandhignaa adiga oo ah qof ku cusub Swiidhan. Akhri wixi dheeraad ah ee ku saabsan nooca caawimaad ee aad heli karto .
Xafiiska guud ee Xafiiska Shaqada - taleefan 0771-416 416
Waxaad kaloo taleefan u soo diri kartaa xafiiska guud, oo taleefanka ku caawini karo. Waxaa lagu hadal siinayaa qof hawlwadene ah. Xafiiska guud qof kasto ayaa soo waco karo, isniin-jimce, saacadaha 8-20, sabti-axad saacadaha 9-16.
Degmooyinka badidooda waxaa laga helaa Xafiiska Shaqada
Haddii taageerada hoyga Internetka ay kugu filnayn, ama aad shaqolaawe tahay, waxaad booqan kartaa Xafiiska Shaqada ee kugu dhow.
Ku saabsan Xafiiska Shaqada
Warbixin ku saabsan Xafiiska Shaqada,waxaa la heli karaa iyadoo ku qoran af ingriisi ama iswiidish. Goobtaan waxaad ka heli kartaa adreesyada, sida sheekada hawlaha Hey'ada. Warbixin ku saabsan xiriiryada, sida adreesyada iyo tilmaanta hawlaha xilsaaran hey'adaha, ururrada, hogamiyeyaalka iyo hawlaha caalamiga ah.
Warbixin ku saabsan shaqo, shuruuda shaqooyinka iyo xaaladaha noolosha ee dalka Iswiidan iyo dalalka ee xubin ka ah isbahaysiga EU/EES shaqo-dooneyada iyo kuwa shaqada bixiya, waxaa la heli karaa iyadoo af-ingriisiga, jarmal, fransiis iyo iswiidish, adigoo riixa Eures.
Ha lagu qeexo lana qiimeeyo aqoontaada, iyadoo la barbardhigaayo tan suuqa shaqada dalka Iswiidan ka hirgashay
Warbixin arrinta ku saabsan
Ku soo-dhowoow Xarunta Shaqada
Gunnada marka barnaamijka laga qaybgalo iyo safarada
Lacagta magdhabidda ee qasnadda shaqo la’aanta
(Ersättning från a-kassa)
Qorsheha Taageero iyo isku habboonaansiinta – taageerada dheeraad ee shaqo raadsashada
Ka wardoon awoodaada camal shaqo qabashada – tijaabi camalo shaqooyin kala duwan adigoo shaqaale ku hoggaaminaayaan
Shaqo ku qorida ku salaysan gogoldhigga xirfadda
Tababar shaqo oo horjooge leh
Qoraal-warbixined ku saabsan shaqo-bilaabid cusub/ shaqo-bilaabid cusub oo gaar ah
Diiwanka Xarunta Shaqada
U shaqaynta Shirkadda Samhall
Gunnada socdaalada, degaanka iyo wehelka
Kallmo dhaqaale oo ku aaddan qalab wax caawiya oo goobta shaqada ah
(Faktablad till arbetssökande - Bidrag til hjälpmedel på arbetsplatsen)
(Faktablad till arbetsgivare - Bidrag til hjälpmedel på arbetsplatsen)
Fursado waxbarasho oo loogu tala galay haddii aad ka qeybqaadaneysid barnaamijka dammaanad-qaadka shaqo iyo horumarin
Dammaanad shaqo ee dhalinyarada
Taageerada loogu talagalay bilaabida dhaqdhaqaaqa ganacsiga
Mas'uuliyadda deegaanka shaqada ee loo shaqeeyeyaasha/qabanqaabiyeyaasha
Tababarka suuqa shaqada
Taageerada gogoldhigga iyo tixraaca gaarka ah
Dhallinyarada u dhibaataysan itaaldarrada
Miyaa adiga kaalmo u baahantahay sidaa ugu qeyb-qaadankartid dhaq-dhaqaaqyada xafiiska shaqada?(nformationsblad- Stöd till funktionshindrade att kunna delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter)